डाइनेष्टिक एयरको हेलिकोप्टर दुर्घटना : को को सवार थिए ? (नामावलीसहित) – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
ताप्लेजुङ, १५ फागुन, फुङलिङ नगरपालिका-१० सिमखोलास्थित तारेभीरको जंगलमा डाइनेष्टिक एयरको हेलिकोप्टर बुधबार दिउसो दुर्घटना हुँदा हेलिकोप्टरमा सवार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित ७ जनाको निधन भएको छ ।
तेह्रथुमबाट ताप्लेजुङको पाथिभरा पुगेर काठमाडौं फर्कने क्रममा उक्त भीरमा हेलिकोप्टर ठोक्किन गई दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनाको खबर प्राप्त हुनासाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङ र अस्थायी प्रहरी चौकी माथिल्लोफेदी समेतबाट तत्काल प्रहरी टोली खटि गई उद्दार कार्य गरिरहेको छ । हेलिकोप्टर जलेर नष्ट भएको छ । घटनास्थल जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङबाट पूर्व उत्तरतर्फ करिब ३ घण्टाको पैदल दुरीमा रहेको छ ।
यस सम्बन्धमा थप आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
Tagged ताप्लेजुङ मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी हेलिकप्टर दुर्घटना
१५ जिल्लामा आजदेखि हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाइदै
स्थानीयले गरे पृथ्वी राजमार्ग बन्द !
Tags: ताप्लेजुङ, मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, हेलिकप्टर दुर्घटना